Homeसमाचारबन झाक्रीले गरे अघोर बाबाको पर्दाफास, बिहेपछी शक्ति रहदैन, ला*श*संगै सम्पर्क गरेको हो ? (भिडियो)
October 31, 2019 Spnews समाचार Comments Off on बन झाक्रीले गरे अघोर बाबाको पर्दाफास, बिहेपछी शक्ति रहदैन, ला*श*संगै सम्पर्क गरेको हो ? (भिडियो)
काठमाडौँको जोरपाटीमा बस्ने वन झाक्री दिल कुमार तामाङको चर्चा अहिले निकै चुलिएको छ। देशमा मात्र नभई विदेशमा समेत उनको चर्चा बढिरहेको छ। उनी आफ्नो झाक्री विद्याले विरामी निको पार्ने कार्य गर्छन्। छोप्नी, काम्नी, बिहोस हुनी र अस्पताल गएर पनि विशोक नहुनी खालका विरामी झाक्री कहाँ आउने गर्छन्।
सानो हुँदा बन झाक्रीले लगेर झाक्री विद्या सिकाएर पठाएको उनको भनाई छ। वन झाक्रीको विद्या पाएको हुनाले दिल कुमार तामाङ्ग पनि वन झाक्री बने। अहिले उनी विरामीको रोग निवारण गर्नमा व्यस्त छन्। छोप्नी, काम्नी, बिहोस हुनी र अस्पताल गएर पनि विशोक नहुनी खालका विरामी झाक्री कहाँ आउने गर्छन। त्यस्तै, उनले अल्सर, क्यान्सर, ग्यास्ट्रिक जस्ता रोग लागेका विरामीलाई अस्पताल जान नै सल्लाह दिने गर्छन्।
झाक्रीको भेष पहिरिएर ढ्यांग्रो ठटाएर विभिन्न मन्त्र जपेर उनी र उनका चेला मिलेर उपचार गर्ने गर्छन। उनले उपचारको क्रममा चामलबाट झोखाना हेर्ने, कुचोद्वारा झारफुक गर्ने, विभिन्न औषधी सुंग्न लगाउने, जनावरको सिङ्गहरु देखि पुजा सामानहरुको पनि प्रयोग गरी पुजाआजा गर्दै धामी उपचार गर्ने गर्छन्। अहिले फेरी उनै वन झाक्रीले भाइरल अघोरी बाबाको बिहेको बारेमा टिप्पणी गरेका छन् ।
उनका अनुसार अघोरी बाबाले बिबाह गर्दा शास्त्र बिपरित भएको बताए । बाकी तलको भिडियोमा हेर्नुहोला ।
यो पनि पढ्नुस – विराटनगरबाट ४१ किलोमिटरको दूरीमा रहेको धरानस्थित पिण्डेश्वर धाम पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ । यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ । पिण्डेश्वर धाममा पूजापाठ गर्न र घुम्न आउनेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । पिण्डेश्वर महादेवको मन्दिर धरान उपमहानगरपालिका–१४ विजयपुरमा अवस्थित छ । यहाँको प्राकृतिक वातावरणले पर्यटकलाई आनन्दित तुल्याउने गरेको छ । पिण्डेश्वरमा अरु बेलाभन्दा साउनमा अत्यधिक भीड लाग्ने गरेको छ । भक्तजनले यहाँ पूजापाठसँगै जल चढाउने गरेका छन् ।
पिण्डेश्वरमा कात्तिक मेलामा वराहक्षेत्र आउने साधुसन्तका लागि हन्डीको व्ययावस्था गरिएको हुदा यसको सम्बन्ध वराहक्षेत्रसंग पनि रहेको मानिन्छ, तथापि प्रत्येक १२ वर्षमा चतरामा लाग्ने महा कुम्भ मेलाको घडाको स्थापना यसै मन्दिरमा थापिएकोले र पिण्डेश्वर मन्दिरमा रहेको अखण्ड ज्योती निभेसको आगो निभ्दा रामधुनीबाट आगो ल्याएर वाल्नुपर्ने र रामधुनीको आगो मर्दा याहाँबाट लगेर सल्काउनु पर्ने प्रचलन रहेकोले पिण्डेश्वर बाबा धामको सम्बन्ध यी मन्दिरहरुसंग पनि रहेको छ । यस धाममा बाला चर्तुदशी, शिवरात्री र तिजमा मेला लाग्ने गर्दछ ।
बन झाक्रीले गरे अघोर बाबाको पर्दाफास
बिहेपछी शक्ति रहदैन
ला*श*संगै सम्पर्क गरेको हो ? (भिडियो)